भर्चुअल सहायकहरू र एसईओ - गुगलबाट विचारहरूको रक्षा गर्दै
जब शब्द एसईओ पप अप हुन्छ, व्यक्तिहरू यसलाई लिखित शब्दसँग संबद्ध गर्छन्। यो हुन सक्छ किनभने प्राय: एसईओले 'टाइप गरिएको' कुञ्जी शब्दहरूमा केन्द्रित गर्दछ वा सायद किनभने धेरै मार्केटर्सले यो सुनिश्चित गर्न चाहेको हो कि यो उनीहरूको वेबसाइट हो जुन गुगलमा खोजी परिणाम प्रदर्शित हुँदा आउँछ। उही समयमा, एक नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको छ - जुन केहि पनि यो संग जानु हुँदैन।
तपाईंले आभासी सहायकहरू (VAs) जस्तै गुगल नाउ र सिरीको उदय याद गर्नु पर्छ, हैन? खोजी ईन्जिनमा खोजी क्वेरी प्रविष्ट गर्नुको सट्टा प्रयोगकर्ताहरू भ्वाइस खोजी प्रयोग गर्न सक्छन्। 50०% भन्दा बढी किशोर र वयस्कहरूले VA प्रयोग गर्दछ, र यो संख्या सतह हुने आशा गरिन्छ।
जबकि प्रयोगकर्ताले उनीहरूको सूचनाहरू सजिलै र द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न मनपराउँदछन्, एक लडाई भइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, गुगल नाउ र सिरिलाई मौखिक पदहरूमा जवाफ दिन विशेष रूपले अनुकूलित गरिएको थियो। त्यस्तै रूपमा, त्यहाँ थप कम्पनीहरूले ध्यान दिनको लागि एक नयाँ अवसर छ। जे भए पनि, VA लाई तिनीहरूको जानकारी कतै पाउनु आवश्यक छ, त्यसोभए त्यहाँ भ्वाइस प्रतिक्रिया प्रणालीको फाइदा लिन किन एक तरिका हुनु हुँदैन?
Semalt का अग्रणी विशेषज्ञ अलेक्ज्याण्डर पेरेसुन्कोले भर्चुअल सहायताको उत्तम उपयोग गर्नका लागि केहि प्रमाणित तरिकाहरू परिभाषित गर्दछ, SEO प्रदर्शन सुधार।
आवाज प्रश्नहरू भेट्नुहोस्
थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा यो हो - भर्चुअल असिस्टन्ट्स (VAs) प्रश्नहरू द्वारा बमबारी गरिएको छैन जुन तपाईं आफ्नो विशिष्ट खोज इञ्जिनमा देख्नुहुन्छ। अवश्य पनि, व्यक्तिहरू तपाईंको व्यवसायको बारेमा जान्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू लामो ब्लग चाहँदैनन्। तिनीहरू केवल आधारभूतहरू चाहान्छन्: तपाईंको ठेगाना, खुल्ने समय, प्रस्तावहरू, आदि। आधारभूत प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न आफैलाई सीमित गर्नुहोस्।
र यस डोमेनमा पनि, त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले सिरी वा अन्य VA तपाईंको वेबसाइटमा दर्साउन सक्नुहुन्न। उदाहरण को लागी, सिरी स्वचालित रूपमा Yelp मा स्थानीय व्यवसाय को लागी ठेगाना जानकारी को लागी लिंक गर्दछ। यसको मतलब यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईका आधारहरू सम्पूर्ण इन्टरनेटमा ढाकिएका छन्।
एक प्राकृतिक आवाज प्रयोग गर्नुहोस्
एक मार्केटरको रूपमा तपाईले सँधै SEO लाई ध्यानमा राखेर तपाईको सामग्री लेख्नु पर्दछ, र त्यस्तै आवाज सोधपुछको लागि जान्छ। एक प्राकृतिक र कुराकानी तरीकामा सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्। एसईओको साथ लेख्न तपाई जति सक्नुहुनेछ, एसईओलाई दिमागमा बोल्न चोट पुर्‍याउँदैन। एक प्राकृतिक आवाज र नयाँ ग्राहकहरु को भूमिका मा अडिग रहनुहोस्।
सही कुञ्जी शब्दहरू छान्नुहोस्
लामो पूंछ कुञ्जी शव्दहरू धेरै सहयोगी हुन सक्दछ जब यो एसईओमा आधारित भ्वाईस खोजीको लागि आउँदछ। उदाहरण को लागी, 'टेनिस जुत्ता NYC' 'टेनिस जुत्ता' को तुलनामा एक अधिक शक्तिशाली प्रश्न हो। तपाईंको स्थान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किवर्डहरूको सेट छनौट गर्नुहोस् जुन सामान्य वेब सर्फरले कुरा गर्ने तरीकाले निर्माण गर्न सकिन्छ। आफैलाई सम्भावित ग्राहकको जुत्तामा राख्नुहोस्।
भविष्य-प्रमाण तपाईंको वेबसाइट
सबै मार्केटरहरू निम्न Google एल्गोरिथ्ममा निद्रा नभएका रातीहरू हुन्छन्। एउटा सानो ट्वीकले खोज क्वेरीको लागि खोज परिणामहरूलाई डबल गर्न कम्पनी पठाउन सक्दछ। जे होस्, गुगल अझै पनी बाहिर छ कि कसरी बोली-अनुकूल वेबसाइटहरु लाई तल दिइएको एल्गोरिथ्ममा दण्डित गरिनेछ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाई राम्रो हुनुहुन्थ्यो। लूपमा जानुहोस्।
आभासी सहायकहरूले कुनै पनि समयमा चाँडै पाठ-आधारित ईन्जिनहरू बदल्दैन, तर तिनीहरूको लोकप्रियता वर्षौं बित्दै जानेछ। तयार होउ। तपाइँको खोज रणनीति परिष्कृत गर्नुहोस् र तपाइँको बिक्री योग्यता मा एक कूल तत्व जोड्नुहोस्।